टिकटक बनाउनुहोस् अनि ५० हजार पुरस्कार जित्नुहोस् – RealPati.com
टिकटक बनाउनुहोस् अनि ५० हजार पुरस्कार जित्नुहोस्
काठमाडौं । फिल्म ‘साइनो’को ‘कुन मायाको साइनो’ बोलको गीतमा पुरस्कार राखिएको छ । एलिश कार्कीको संगीत तथा प्रताप दास र जीना रसाइलीको स्वर रहेको गीतको टिकटक भिडियो आह्वान गरिएको छ । जसमा नगद पुरस्कार समेत राखिएको हो ।
राजेशकुमार श्रेष्ठको शब्द रहेको गीतको भिडियोमा कलाकार नचाउने काम भने कोरियोग्राफर रामजी लामिछानेले गरेका छन् । गीतमा अभिनेत्रीद्वय नीता ढुंगाना, मिरुना मगर र नव अभिनेता राज कुमार बीचको त्रिकोणात्मक प्रेम देखाइएको छ ।
गीतको कुनै पनि अंशमा इच्छुकले टिकटक भिडियो बनाउन सक्ने निर्देशक रमेश थापाले जानकारी दिए । टिकटक बनाएर ‘साइनो’ फिल्मको अफिसियल फेसबुक पेजमा पठाउनु पर्नेछ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुनेलाई ५० हजार, दोस्रोलाई ३० हजार र तेस्रोलाई २० हजारको दरले पुरस्कार दिइने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, पाँच जनालाई गिफ्ट ह्याम्पर र दुई जना भाग्यशालीलाई आस्था कला केन्द्रमा १ वर्षको लागि निःशुल्क प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । विजेताको घोषणा फिल्म रिलिज अगावै हुनेछ । साउन २४ मा फिल्म रिलिज हुँदैछ ।
फिल्ममा भुवन चन्द, बसुन्धरा भुषाल, मदनदास श्रेष्ठ, राजा राजेन्द्र पोखरेल, रोयदीप श्रेष्ठ, श्याम राईलगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
फेसियल हाउसको १३ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
डा. प्रमोद यादव जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा
निर्वतमान सभामुख महरा पक्राउ
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि अबको सरकार कसको ?
चार दिनसम्म पनि माया नभेटिएपछि खोजिदिन परिवारको आग्रह
फागुन २१ बाट दर्शकमाझ ‘गोर्खे’ आउँदै
सरकार र विप्लव समूहबीच एकै दिन दुई चरणको वार्ता सम्पन्न
सांसद दवाडीले आफूले लगाएको ज्याकेट नै फुकालेर किन लाइदिए ? 858 views
सांसद दवाडीले आफूले लगाएको ज्याकेट नै फुकालेर किन लाइदिए ?